थाहा खबर: महेश श्रेष्ठ
हामीले अन्य अध्यायहरूमा निर्विचार अवस्था कसरी पाउने भन्ने चर्चा गर्‍यौँ। यो अवस्‍था प्राप्त गर्न कठिन त छ तर असम्‍भव छैन। तथापि आज हामी यति विघ्‍न विचार प्रधान भयौं कि निर्विचारको अवस्‍थाको चर्चा गर्दा थुप्रै मानिसहरूले शुरूमै असमर्थता जनाउने छन्। उन...
मस्तिष्क विकासमा ध्यानको भूमिका
‘न्युरोप्लास्टिसिटी’ वा ‘न्युरोजेनेसिस्’ के हो? संसारको सबैभन्दा जटिलतम वस्तु भनेको ८६ अर्ब ‘न्युरोन्सहरू’को सञ्जालले बनेको मानव मस्तिष्क नै हो। सानो आकारको मानव मस्तिष्क वैज्ञानिकहरूका लागि विशाल अन्तरिक्ष भन्दा कम चुनौतीपूर्ण ...
मानसिक रूपान्तरणको एक मात्रै मार्ग ध्यान
| चैत १५, २०७५
मानसिक सन्तुलन गुमाएको मानिसले बोलेका कुरा पाँच मिनेट रेकड गर्नुहोस्। अब तपाईँ स्वयं पाँच मिनेटका लागि आँखा चिम्म गर्नुहोस्। अनि मनमा आएका सबै विचारहरूलाई नछुटाई लेख्नुहोस्। अनि आफूले लेखेका कुराहरूलाई पढ्दै अडियो रेकर्ड गर्नुहोस्। अनि पहिला रेक...
कुनै पनि कलाको मर्म शाब्दिक अर्थमा भन्दा पनि उपयोगितामा हुन्छ। अध्यात्म भन्नु नै आनन्दसँग जिउने कला हो। अध्यात्ममा ध्वनिको निक्कै महत्त्व छ। मानिसलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा ध्वनि कसरी उपयोगी हुनसक्छ भनेर प्राचीन ऋषिमुनीहरूले गहिरो अनुसन्धान गरेका थिए। उनीहरूले ‘मन्त्र...
मानसिक विकार र निराकरणका उपाय
| फागुन ११, २०७५
नैतिक शिक्षाले गर्छ हानि धर्मगुरुहरूले, पण्डितहरूले, पुजारीहरूले, पादरीहरूले, मौलानाहरूले, शिक्षकहरूले, मातापिताहरूले अनि अन्य अग्रजहरूले नैतिक शिक्षा सिकाएका छन्। बारम्बार सिकाएका छन्। हामी स्वयंले धर्मशास्त्रहरूमा र किताबहरूमा नैतिकताका कुरा अध्ययन गरेका छौँ। कसल...
आज विश्वमा मानिसको स्वास्थ्यका लागि खर्बौं लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। मानिसले स्वास्थ्यका लागि जायजेथा बेच्नुपरेको छ। हाम्रै मुलुकको प्रसंगमा पनि अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। कुरा पैसाको मात्रै प...
हामी एउटा प्रश्न आफैँसँग गरौँ- ‘म’ को हुँ? परिचय दिने सन्दर्भमा सुरुमै हामीले आफ्नो नाम र थर सम्झनेछौँ। हामीले आफ्नो राष्ट्रियता र धर्म सम्झनेछौँ। अब हामी आफैँसँग प्रश्नहरू गरौँ- हामीले आफ्नो नाम आफैँले राखेका हौँ कि अरूले राख...
'उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक' : महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हामी लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर बाँच्नुपर्छ भन्ने संस्कारमा हुर्के बढेका हौँ। सानै हुँदादेखि परीक्षा वा प्रतियोगितामा प्रथम हुँदा वाहवाही गरेर अबिर दलिदिने। परीक्षामा वा प्रतियोगितामा पछाडि प...
| भदौ १०, २०७५
जहाँ जे छैन, त्यही कुराको आकर्षण धेरै हुन्छ। मानिसले सबैभन्दा धेरै चासो दिएको कुरा प्रेम हो। साहित्य, संगीत, चलचित्र, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादिमा मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने हरेक माध्यममा प्रेमको प्राचुर्य छ। हामीलाई झूट लाग्न सक्छ तर यतिबिघ्न ...
सामाजिक पहिचान भ्रम मात्र
किन मानिस तृप्त छैनन्? आत्मा केन्द्र हो। शरीर आत्माको परिधि हो। चेतना केन्द्र हो। विचार र संवेदना चेतनाका परिधि हुन्। आत्मा अनन्त छ। चेतना अनन्त छ। शरीर सीमित छ। विचार र संवेदना पनि सीमित छन्। अनन्तमा केही चिज घट्नु र जोडिनुले केही फरक पर्दैन। अनन्तमा केही जो...
ब्रह्माण्ड चेतनाको विशाल पावर हाउस
| साउन ९, २०७५
‘मेरा लागि गणितको त्यो सूत्रको कुनै मतलब नै छैन, जुनबाट मलाई अध्यात्मिक विचार नमिलेको होस्।’ – श्रीनिवास रामानुजन गणितको कुनै विशेष अध्ययन नगरेका श्रीनिवास रामानुजन आधुनिक समयका एक महान् गणितज्ञ हुन्। भारतीय नागरिक श्रीनिवासको के दाबी थ...
मानसिक शान्तिका लागि बोधको महत्त्व
विचार र बोधबीच अन्तर नै विज्ञान र अध्यात्मबीचको अन्तरको कारण हो। विज्ञान र अध्यात्म दुवैको उद्देश्य एउटै हो– सत्य खोजेर मानव जीवनलाई सुखमय बनाउनु तर बाटाहरू फरक छन्। सत्य खोज्ने आधारहरू फरक छन्। धरातलहरू फरक छन्। अझ भनौँ, विज्ञान र अध्यात्मले एकै ठाउँमा पुग्न ठ्या...
मस्तिष्क विज्ञानका सन्दर्भमा विगत दुई दशकदेखि वैज्ञानिकको चाख ह्वात्तै बढ्दै गएको छ। यसरी मस्तिष्क विज्ञानमा वैज्ञानिकको चाख बढ्दै गर्दा मानव मस्तिष्कसम्बन्धी रोचक तथ्यहरू बाहिर आउँदै छन्। कुन समयमा खाने, कुन समयमा व्यायाम गर्ने, कुन समयमा अध्ययन गर्ने, कुन समयमा प्रणय क्रिया गर्...
| असोज १२, २०७४
'मान्छे स्वभावैले हिंस्रक छ' मान्छे स्वभावैले हिंस्रक हुन्छ। त्यसैले हामी हिंसाप्रति आकर्षित भएका हौँ। किन महाभारतकालीन लामो कालखण्डको गीताको चर्चा यति धेरै छ? किन रामायणका अरू प्रसंग गौण छन् तर राम र रावणको युद्धको सन्दर्भलाई महत्त्व दिँदै हामी दसैँ मनाउँछौँ?...
मूर्ति पूजाको पक्षमा
| असोज ५, २०७४
हरेक भौतिक चिजको नदेखिने अर्को पाटो हुन्छ। शरीरको आत्मा हुन्छ। आयु भौतिक मात्र छैन, त्यससँगै जिन्दगीका अनुभवहरू पनि जोडिएका छन्। आँखाहरू सँगसँगै सपना पनि त छन्! भौतिकतामा मात्र विश्वास गर्नेहरूले संसारलाई आंशिक मात्र बुझेका छन्। भौतिकतामा विश्वास गर्नेका लागि...
चुल्ठो काटिने घटनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष
| भदौ १५, २०७४
केही हप्तादेखि भारतका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेशलगायतका सात राज्यमा एकाएक अज्ञात चिजले महिलाहरूको कपाल काटिदिएका घटनाहरू बाहिर आए। तर सबै घटनाका सन्दर्भमा कोही पीडितले पनि निक्र्योसँग कसले कपाल काटिदियो भन्न सकेनन्। अधिकांश घटनाहरूमा महिलाको श...
| भदौ २, २०७४
जीवन जिउने दुई तरिका छन्, कि तपाईं सबै चिजलाई अत्यन्तै गंभीर रूपमा लिनुहुन्छ कि सबै चिजलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ। कसरी बाँच्ने हो तपाईंकै हातमा छ। गंभीर भएर बाँच्दा जिन्दगी दुःखपूर्ण हुन्छ। गंभीर मान्छेहरूका लागि सामान्य केही पनि छैन। दुर्घटना, असफलता, अव...
हाडनाताबीच विवाह!, किन हुन्छ यस्तो?
| असार ५, २०७४
हिजोको ढुङ्गे युगको संसारभन्दा आजको विश्व सहज र सरल छैन। आधुनिक समयमा मानव सभ्यता, विज्ञान, भौतिक संरचनालगायतका विकासका विभिन्न आयामले मानव मस्तिष्कलाई हिजोको भन्दा महत्त्वाकांक्षी बनाएको छ। प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। हिंस्रक बनाएको छ। समाज जुन रूपमा जटिल बन्दै छ, सोही अनु...
| बैशाख २९, २०७४
भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको हल्ला चल्नेबित्तिकै स्थानीय गाउँलेहरूले बुद्धका सामु जम्मा भएर सोधेछन्– ‘यति लामो ध्यानपश्चात् तपाईंले के पाउनुभयो? प्रतिउत्तरमा बुद्धले भनेछन्, ‘मैले नयाँ केही पनि पाइनँ, हिजो जे मसँग थियो, मैले त्यही चिजलाई चिनें...
प्राकृतिक नियमका सवालमा हरेक प्राणीको प्रमुख दायित्व भनेको बच्चा जन्माएर आफ्नो वंशको निरन्तरता गर्नु हो। पोथीको प्राकृतिक दायित्व भनेको बच्चालाई गर्भमा विकास गरेर जन्म दिनु र बच्चाको रेखदेख गर्नु हो। भालेको प्राकृतिक दायित्व भनेको, बच्चालाई हुर्काउनुमा पोथीको सहायक हुनु ह...